प्रकृति संग सद्भाव! जापानको परिवर्तित मौसममा जीवन - Best of Japan
प्रकृति, जापान = एडोब स्टकको साथ सद्भाव
जापानमा चार धनी seतुहरू छन्। जापानी कृषि अनुसार चार asonsतुहरु मा परिवर्तन परिवर्तन र जब धान प्रशस्त मात्रामा बढ्छ जापानी भगवानलाई धन्यवाद गर्न चाडहरु मनाउँछ। चार asonsतुहरूको यस चक्रमा, विभिन्न अनौठो संस्कृतिहरू विकास भएको छ। म तपाईंलाई जापानी जनताको जीवनशैली र संस्कृति र जापानको प्रकृतिसँगको उनीहरूको सम्बन्ध परिचय दिन चाहन्छु।
धनी .तुहरूको अनुग्रहको साथ बाँचिरहेका छौं
जापानी जीवन को बारे मा सिफारिश भिडियो
जापान मा एक स्पष्ट मौसमी परिवर्तन छ। गर्मी धेरै तातो छ, तर तातो सधैंको लागि रहँदैन। तापक्रम बिस्तारै खस्छ र रूखका पातहरू रातो र पहेंलो हुन्छन्। अन्ततः, कडा जाडो पछ्याउनेछ। मान्छे चिसो प्रतिरोध र न्यानो वसन्त आउन को लागी प्रतीक्षा। यस मौसमी परिवर्तनले जापानी जनताको जीवन र संस्कृतिमा ठूलो असर गरेको छ। प्रत्येक अवस्था क्षेत्र अनुसार फरक फरक हुन्छ। यस पृष्ठमा, म चार मौसमहरू र जापानमा बस्ने बारेमा छलफल गर्नेछु। जापानमा मौसम atsतु परिवर्तनको बारेमा जापानमा शोगत्सु हिउँदमा हिउँदको मौसममा शरद omतुमा शरद hतुमा क्रिस्टमास जापानमा मौसमी परिवर्तनको बारेमा जापानमा माउन्ट फुजी हिउँदमा हिउँदमा कावागुचीको जापान - शुट्टरस्टाकमा जाडोमा पर्यटक स्थलहरूमा कम यातायात पाइन्छ, जसले बहादुरी देखाउने व्यक्तिहरू दिन्छन्। जाडो को प्रसिद्ध क्षेत्र को एक व्यक्तिगत सामना चिसो। जापानमा, जनवरी (नयाँ वर्षको छुट्टी पछि) स्की ढलानमा हिर्काउने समय हो। फेब्रुअरी जापान मा मौसम को शुरुआत चिह्नित। जमिनको माथि, जापानको उत्तरी र मध्य टापुहरूमा फेब्रुअरी जापानको सबैभन्दा चिसो महिना हो। मार्च तातो तापक्रम र अपेक्षित चेरी खिलने मौसमको शुरुवातको कारण जापान भ्रमण गर्न उत्तम समय हो। मार्च सम्म जापानका क्षेत्रहरूले चेरीको फूलहरू देख्न थाल्नेछन् जसले हनामी उत्सवहरू ल्याउँदछन्। यो जापानमा हुनको लागि धेरै नै रमाइलो र हंसमुख समय हो र त्यो देशको सबैभन्दा सामाजिक परम्पराको अनुभव गर्ने भयानक तरिका हो। अप्रिलको बढ्दो तापक्रम ...
तपाई कहिले जापान यात्रा गर्ने योजना गर्नुहुन्छ?
जापानमा, मौसम मौसममा निर्भर गर्दछ। त्यसकारण, म सिफारिश गर्दछु कि तपाइँ मौसम को मौसम मा हेर्नुहोस् जुन तपाइँ यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ।
यहाँ, म हरेक महिना परिचय गराउन चाहन्छु र यो जापानको चार सत्रहरूमा कसरी सम्बन्धित छ। कृपया पृष्ठमा भ्रमण गर्नको लागि तपाईंले माथिको छविबाट रूचि राख्नु भएको मौसम चयन गर्नुहोस्।